Tsika - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Corporate chiratidzo (kuratidza chinzvimbo nekutenda kwevakuru manejimendi)
A. Iva anonyanya kukwikwidza mutengesi mune chaiyo machining indasitiri
B. Neye yakanakisa michina uye yakanakisa tekinoroji yekuve yakanyanya kutsigira sevhisi mupi mune chaiyo machining indasitiri
C. Gadzira mhando yepamusoro yehunyanzvi hwekutengesa machina
Corporate basa: (pamwe nehumwe hwerimwe basa rehukama)
Kutora CNC chaiyo machining semutakuri, inogadzira kukosha kwevatengi uye inoziva iyo goho rakapetwa remushandi mweya uye zvinhu zvebudiriro.
Mutemo wehutano:yakatarisana nemhando yepamusoro, kugona; kuramba uchivandudza, kugutsikana kwevatengi
Mutemo wezvemamiriro ekunze:chengetedza simba uye uderedze marara; chengetedza pasi uye kudzivirira kusvibiswa;
Isu tinofanirwa kutevedzera mitemo nemirau, kutsigira zvakasvibirira, kuita kuti dzidziso dziwedzere uye kusimudzira zvirinani.
Makore ekutanga: basa rekuchenjera, mari nemari.
"Mutengi" apa zvinoreva kumiririra vatengi, vashandi, vanotengesa, mabhizinesi uye nzanga!
Bhizinesi uzivi: kurwira, hunyanzvi, hushamwari uye kuzvipira, pragmatic uye inoshanda.
Kurwisana:kushanda nesimba ndiwo mafungiro emumwe nemumwe wedu kushanda nesimba. Kana tangorega, tinobviswa. Naizvozvo, tinosimbisa kuti tinofanira kufamba pamwe chete, kukurudzira kupfuura panguva, kukunda kusafunga zvekufambira mberi;
Kubudirira uye Kuvandudza:hunyanzvi hunogona kuwedzera nzvimbo yekugara yebhizinesi. Pafungidziro yekuenderana nemirau, vese vashandi vanogona kutora chikamu munzvimbo zhinji dzakadai sisitimu yekuvandudza uye kugadzirisa maitiro kuburikidza nemabasa akawandisa ekudzidza, kuti vazive vese vashandi vehunyanzvi;
Fraternity uye kuzvipira:yakatarisana nevanhu ndiyo yepakati bhizinesi uzivi hweJixin. Isu tinotsigira tsika yemhuri uye tinorega nhengo dzemhuri kubva pasirese kubatana uye kudanana, kuunganidza simba, kuda kupa, kubatsirana, kuda basa uye kuda Wally, uye kutarisa kambani semba;
Inoshamisa uye inoshanda:nemafungiro ekubatana, kushandira pamwe kwechokwadi uye kusambozeza mutoro, tinogona kuzadzisa chinangwa zvakanaka. Kuburikidza neanoshanda mashandiro, isu tinogona kunyatso kutaurirana, kurongedza uye kugadzirisa dambudziko zvakakwana, kutanga nemagumo.